ပန်ဒါဝက်ဝံကြီး - ဝီကီပီးဒီးယား
မျိုးသုဉ်းရန် အန္တရာယ်ရှိ (ESA)
ပန်ဒါဝက်ဝံကြီး (en: Giant panda) ခေါ် ဝက်ဝံမျိုးကို တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ပန်ဒါဝံကြီး၏ ပါဏဗေဒအမည်မှာ အီလျူရော့ပိုဒါ မီလာနိုလျူကာ (Ailuropoda melanoleuca) ဖြစ်သည်။
ပန်ဒါကြီးများသည် တောရိုင်းထဲတွင် ရှင်သန် နေထိုင်သော မျိုးနွယ်များဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် နေရာပိုင်နက် သတ်မှတ်ကာ သီးခြားနေထိုင်တတ်ကြသည်။ ဆက်သွယ်ရေးအနေနှင့် ပန်ဒါ အချင်းချင်း အသံပေး ဆက်သွယ်ခြင်း သစ်ပင်များကို ကျင်ငယ်စွန့်ကာ အနံ့ ပေးခြင်း တို့ကိုပြုမူတတ်ကြသည်။ သစ်ပင်တက် ကျွမ်းကျင်ကာ ကျောက်တောင်များ သစ်ခေါင်းများအတွင်း နေထိုင်တတ်ကြသော်လည်း နေရာအတည်တကျ နေထိုင်ခြင်းမရှိကြချေ။ အခြား နို့တိုက်သတ္တဝါများကဲ့သို့ ဆောင်းခိုခြင်းအလေ့အထမရှိတတ်ဘဲ ပူနွေးသောဒေသများသို့ သာ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်တတ်ကြသည်။ မိတ်ရာသီတွင်သာ ပန်ဒါ အချင်းချင်းရင်းနှီးစွာ နေထိုင်တတ်ကြကာ ရာသီကုန်တွင် သီးခြားပြန်လည် နေထိုင်တတ်သည်။ ပန်ဒါများသည်ရန်မလို တတ်သော်လည်း လူကို တိုက်ခိုက်တတ်ကြသည်။
↑ Swaisgood, R. (2016). "Ailuropoda melanoleuca". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
↑ Species Profile။
↑ "Voyage en Chine" (1869). Bulletin des Nouvelles Archives du Muséum 5. “Ursus melanoleucus”
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပန်ဒါဝက်ဝံကြီး&oldid=710755" မှ ရယူရန်
၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။